Fans တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဟာ ''Rude''အဖြစ်ဆုံး အဖွဲ့လား?
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေ BLackpink အဖွဲ့ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ K-Pop လောကထဲမှာ အကျော်ကြားဆုံး၊ အအောင်မြင်ဆုံးမိန်းကလေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ”How you like that” နဲ့အတူ အောင်မြင်စွာပြန်လာပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အံ့ဩတုန်လှုပ်မှုတွေနဲ့အတူ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ မှတ်တမ်းအမျိုးမျိုးကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီလထဲမှာလည်း ပြိုင်ဘက်ကင်းပြီး ထူးခြားသောအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Selena Gomez နဲ့လည်း collaborate လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ တစ်ချို့Fans တွေဟာ Quora အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Blackpink အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန်အတော်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Post ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ ”BLackpink အဖွဲ့ဟာ rude ဖြစ်သလား? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောမတူကွဲပြားသောအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ် စော်ကားပုတ်ခတ်သောထင်မြင်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
Fans တွေ Icy-Visual ဘုရင်မလို့ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Jennie အကြောင်းကို ပထမဆုံးပြောခဲ့ကြပါတယ်။
”Jennie ဟာ တော်ကောင်းတော်နိုင်ပေမယ့် သူမက စိတ်ပါလက်ပါ အလုပ်လုပ်နိုင်ရဲ့လား? ငါဆိုလိုတာက သူမဟာ ဘယ်လောက် လေးစားမှုမရှိလိုက်သလဲ၊ နောက်ပြီး သူမရဲ့ rap skill နှင့် သီချင်းသီဆိုမှုကြီးတွေကလည်း ငါတို့ကို သတ်နေသလိုပဲ”
”ဟုတ်ပါတယ်၊ အရမ်းမှန်တယ်၊ Jennie ရဲ့ Performance တွေကလည်း အမှန်တကယ်မယုံနိုင်လောက်အောင် rude ဖြစ်သူတစ်ယောက်ပါ”
”Jennie ဟာ ဟန်ဆောင်ပြီး ပြုံးတတ်သလား? အမ်၊ တစ်ခုလောက်ပြောပါရစေ ကျွန်မတို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေကို ဒီနည်းလမ်းနဲ့ တော့ ဘယ်တော့မှ ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်”
ဒီတစ်ခါတော့ Lisa ဘက်ရောက်သွားပါပြီ။ Fans တွေဟာ အကဘုရင်မအကြောင်း အတင်းတုတ်ကြပြန်ပါတယ်။ ဆိုးဆိုးရွားရွားပဲ K-Pop လောကမှာ သူမကို အကောင်းဆုံး dancer အဖြစ် ဘယ်သူက သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာလဲ?
ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒါမှန်တယ်။ သူမဟာ အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ dancer တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမက သူမရဲ့ visuals ကလည်း လေးစားမှုမရှိစွာနဲ့ပဲ လှပလွန်းနေတယ်။ သူမကို အလွန်အကျွံ perfect ဖြစ်နေဖို့ ဘယ်သူခွင့်ပြုလိုက်တာလဲ?
Rosé ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့် rude ဖြစ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါနဲ့ သူမကို ဘယ်သူသီချင်းကောင်းကောင်းသီဆိုခွင့်ပေးခဲ့တာလဲ? သူမ သီချင်းသီဆိုတဲ့အခါ ငါတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို ပျော်ရွှင်အောင်၊ ငိုကြွေးအောင် လုပ်တာကြောင့်မို့ သူမဟာလည်း အရမ်း rude ဖြစ်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
မှန်တယ်၊ Rosé ဟာ ပြိုင်ဘက်ကင်းပြီး စွမ်းအားပြည့်သော အသံကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သာမန်လူတွေဟာ သူမရဲ့ သီချင်းတွေကို ဘယ်လိုခံနိုင်ရည်မျိုးနဲ့ နားဆင်ကြမလဲ?
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကျန်တာကတော့ Jisoo ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လေဒီလေးကို ဝေဖန်အပြစ်တင်စရာမရှိလောက်ဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူမလည်း ကံမကောင်းရှာပါဘူး။
”Kim Jisoo လား၊ အာ….သူမရဲ့ နာမည်မှာတင် အာရုံတော်တော်နောက်တယ်။ သူမရဲ့ အလွန်အကျွံလှပလွန်းနေတာကြီးကို ဘယ်တော့ရပ်မလဲ? တည်ကြည်လေးနက်လွန်းသလို လုပ်နေတာတွေ ရပ်ဖို့ လိုနေပြီ။ သူမဟာ ဘယ်လောက်လှလိုက်သလဲ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘာလို့ အရည်အချင်းတွေရော၊ အရည်အသွေးတွေပါ ပြည့်ဝနေရတာလဲ? ဘယ်သူနဲ့မှ မထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ကင်းစင်လွန်းတဲ့ အလှတရားကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာက တစ်ခြားလူတွေအတွက် မျှတမှုမရှိဘူး။
အားလုံးခြုံငုံလိုက်ချိန်မှာ Fans တွေဆိုလိုတဲ့ Rude ဆိုတာက
E- Elegant ပါတဲ့နော်။